रातमा बर्षा राउतको हात काटिएपछि…! « Ramailo छ
रातमा बर्षा राउतको हात काटिएपछि…!
प्रकाशित मिति : Mar 6, 2018
फागुन २१ गते सोमबार, निर्माता रौनक विक्रम कडेलको जन्मदिनको पार्टी थियो । करिब रातको दश बजेतिर निर्माता कडेलको नाराणथान निवासमा केक काट्ने तयारी भयो । वर्थ डे म्यान सहित अभिनेता दयाहाङ राई, निर्देशक निश्चल बस्नेत, नायिका बर्षा राउत लगायत केकको वरपर उभिएका थिए ।
निर्माता मणिराम गौतमले ह्याप्पी वर्थ डे नाराण भन्दै ताली बजाउन थाले । केहीले केक माथि झुण्ड्याइएको बलुन फुटाए । बलुनमा भरिएको झिझिरे केकमाथि पर्यो । केकमा झरिरहेको झिरझिरेलाई रौनकले चक्कु लिएको हातले नै रोक्न थाले । रौनकको चक्कु नजिकै रहेकी बर्षाको दाहिने नाडीमा पर्यो । बर्षा रुँदै छेउ लागिन् । पलभरमै उनको हातबाट रगत बग्न थाल्यो । उनले आफ्नो आँसु थाम्न सकिनन् । निर्देशक सुरेन्द पौडेलले बर्षालाई थम्थमाउँने कोशिस गरे तर बर्षाको नाडीबाट रगत र आँखाबाट आँसु बगिरह्यो ।
यता केक खाने र खुवाउने क्रम चलिरहेको थियो । उता निर्देशक पौडेलले बर्षालाई गाडीमा राखेर महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पतालाई हुँईंकाए । ह्याण्डी प्लास्ट लगाएर रगत रोकिएपनि बर्षा निकै आत्तिरहेकी थिइन् । इमरजेन्सीमा पनि आत्तिएकी बर्षाको छिट्टै उपचार हुन सकेन । सरकारी डाक्टरको ढिलासुस्तीका कारण करिब एक घण्टाको पर्खाइपछि बर्षालाई ओपिडीमा लगियो ।
ओपिडीमा बस्दै गर्दा दयाहाङ, निश्चल, मणिराम, रौनक, निर्देशक हेमराज विसी, नायक गौरव पहारी, सिनेम्याटोग्राफर शैलेन्द्र डि कार्की, कलाकार अरुणा कार्की लगायत आइपुगे । गफ गर्दै गर्दा सुरेन्द्रले बर्षालाई डोर्याएर बाहिर ल्याए । ‘पाँच टाँका लगाउनु पर्यो’, सुरेन्द्रले सुनाए । दया, निश्चल, शैलेन्द्र, अरुणा घरतिर लागे । बाँकी नारायणथान फर्किए ।
केही बेरमा घटेको नरमाईलो घटनापछि रमाईलो सुरु भयो । तर रमाउँदै गर्दा पनि सबैले एक अर्कालाई प्रश्न भने गरिरहे, ‘आखिर हात कसरी काटियो ?’ बर्षासँगै सञ्चारकर्मी बैकुण्ठराज पराजुलीको दायाँतर्फको काइँली औंलाको माथिल्लो भाग काटिएको थियो । चक्कु बोकेका ‘वर्थ डे म्यान’को समेत औंलामा चोट लागेको थियो । एउटा चक्कुले तीन जनालाई कसरी चोट पुर्यायो ?